Ukuzinza okutsha nokuphuculweyo kweekhamera ze-iPhone 13 IPhone iindaba
Ukuzinziswa okutsha nokuphuculweyo kweekhamera ze-iPhone 13
Uzinzo lwekhamera ye-iPhone yenye yezona zinto zibalulekileyo, yiyo loo nto ngaphandle kokuba usungule ukhuphiswano ngezixhobo ezineekhamera ezingcono ephepheni, inyani kukuba bakude kakhulu nokurekhodwa kwevidiyo ye-iPhone kuyo yonke imiba.
Ngokutsho kwabahlalutyi, Uluhlu olutsha lwe-iPhone 13 luya kubandakanya ukuzinziswa kokufuduka okubonakalayo kuzo zonke izixhobo zalo. Ngaphandle kwamathandabuzo iApple iya kuqhubeka nokusebenza kwikhamera kunye nokubheja kwirekhodi yokuzihlulahlula kukhuphiswano oluthe ngqo, ngaba oku kuya phambili kozinzo kuya kuthetha umtsi wokwenene? Siza kubona.
Ngokwe-DigiTimes, njengoko babelane nge MacRumors, uzinzo ngokufuduswa kwenzwa kuya kubakho kuzo zonke izixhobo eziza kuphehlelelwa ukuphela kuka-2021. Eli nqaku alizukuvumela kuphela ukurekhodwa ngozinzo oluqhelekileyo lwekhamera yefilimu, kodwa sinokuwuphucula umgangatho weefoto kwimeko zokukhanya ezibi kakhulu.
Abavelisi be-VCM (Voce Coil Motor) baceliwe ukuba bandise umthamo wokuvelisa nge-30-40% yokujongana neemfuno ezinamandla kulandela ukufakwa kuluhlu olutsha lwe-iPhone.
Olu hlobo lwenzwa sele lukhona kwi-Wide Angle sensor ye-iPhone 12 Pro Max, eneziphumo ezibonakalayo, ukufumana ukuphucuka okubonakalayo kwiifoto nakwiimeko zokukhanya eziphantsi. Nge-iPhone 13 olu hlobo lokuzinza aluzukufikelela kuphela "kumntu omkhulu" wosapho, kodwa luya kubakho nakwiindawo ezisezantsi, ezinje nge-iPhone 13 kunye ne-iPhone 13 Mini. Icandelo lokufota le-iPhone 13 iya kuba yeyona nto inomtsalane kubasebenzisi kwaye iApple iya kugxila kwimizamo yayo, ke kubonakala ngathi siza kujongana ne-iPhone 12 "S", ngaba unomdla kwezi ndaba ze-Apple zintsha?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » Ukuzinziswa okutsha nokuphuculweyo kweekhamera ze-iPhone 13
Imouse yobuGcisa ophupha ngayo kwaye ayisoze ize
Le yindlela iApple ephucule ngayo iiforamu zeengxoxo zeWWDC 2021